Njengamanje iChiefs idinga ukunqoba ekhaya | Scrolla Izindaba
Njengamanje iChiefs idinga ukunqoba ekhaya
Umgadli weKaizer Chiefs uSamir “Kokota ” Nurkovic uthe kubalulekile ukuthi banqobe uma sebebhekene neTshakhuma Tsha Madzivhandila edonsa kanzima ngoLwesibili njengoba Amakhosi evuka emlotheni.
Selokhu ebuyile ekuqaleni kwale nyanga ekulimaleni izinyanga ezine, abadlali beChiefs baqale ukuzethemba futhi.
“Njengamanje asinaso isikhathi sokucabanga ngezimbangi zethu. Sidinga ukugxila kithina nasemdlalweni wethu. Sidinga ukuqhubeka nomoya wethu omuhle wokulwa futhi sinikeze abalandeli bethu lokho esibanike kona emidlalweni yethu emibili edlule,” kusho uNurkovic.
UNurkovic ushaye igoli lakhe lokuqala lesizini ngoLwesithathu olwedlule bebhekene naMaZulu kanti nangoMgqibelo uphinde waba nesandla ekunqobeni kwaMakhosi ngesikhathi beshaya iCape Town City. UNurkovic usize uHappy Mashiane oshayele iChiefs igoli lokuwina.
Lo mgadli kulindeleke ukuthi futhi adlale indima ebalulekile ngoLwesibili njengoba iChiefs izofuna ukunqoba kwayo kokuqala ekhaya ibhekene neTshakhuma Tsha Madzivhandila edonsa kanzima.
“Angikalitholi ithuba lokubuka imidlalo yabo. Into eyodwa esemqondweni wami ukuthi mina nozakwethu singenza kanjani kangcono emdlalweni olandelayo,” kusho uNurkovic.
Ukunqoba kweChiefs ngoMgqibelo kube ukunqoba kwabo kwesithathu ekuhambeni kule sizini. Basazonqoba ekhaya kodwa bazowenza amathuba abo uma sebebhekene neTshakhuma enezinkinga e-FNB Stadium.
Umqeqeshi uGavin Hunt uthe badinga ukushintsha irekhodi labo eliyinhlekelele ekhaya.
“NgoLwesibili sidinga ukushintsha izinto siqale ukuwina ekhaya,” kusho uHunt.
IChiefs isiqoqe amaphuzu amathathu kuphela ekhaya kusukela kwayi-15 iqala.
Kwezinye izindaba ze-DStv Premiership, iMamelodi Sundowns iwine i-Premiership Q-Innovation Quarter One. Ngemuva kwemidlalo eyisishiyagalombili yokuqala yeligi womabili la maqembu iSundowns neSwallows ebekwe isibili aqede ngamaphuzu ayi-18 lilinye kodwa iDowns yajabulela umehluko wamagoli ophakeme yaphinde yanqoba njengabanqobi be-Q1.
Kusasa iDowns izobe ibhekene neBloemfontein Celtic eLucas Moripe Stadium ngehora le-5 ntambama.
Picture source: @KaizerChiefs